महेन्द्र वीर विक्रम शाह वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह
ठमेल, काठमाडौँ, नेपाल
चीनको सीमानामा नेपाली भूमिमा रहेका भारतीय चेकपोष्टहरु विष्टकै पालामा हटेका हुन् । र, यही कारणले उनलाई भारतविरोधी राष्ट्रवादी नेताका रूपमा हेर्ने गरिएको छ
शाही नेपाली सेनाका जवानहरूले रातभर आगो निभाउने असफल प्रयास गरेका थिए । उनीहरूकै प्रयासले सिंहदरबारको अग्रभाग मात्रै जोगियो, अरु सबै जल्यो । अहिले त राजधानीमा बारुण यन्त्रहरु चुस्त दुरुस्त छैनन, त्यो बेला बालुवा र माटो हालेर आगो निभाउन सकिने कुरै थिएन ।
त्यस्तै ०३६ साल जेठ १० गते विष्टले दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । राष्ट्रिय पञ्चायतको ३० औँ अधिवेशन चाँडै बस्न लागेको र सो पञ्चायतले नै नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गरोस् भन्ने राजाले चाहेको भन्दै उनले राजीनामा दिएका थिए । ज्यान गए पनि कुर्सी नछाड्ने नैतिकताहीन नेताहरुका लागि कीर्तिनिधि विष्ट नैतिकताका ‘सिंहदरबार’ नै हुन्, जो शनिबार दिउँसो आर्यघाटमा सुटुक्क जलेर प्रकृतिमा लीन भएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री विष्ट खासै ‘हाइप्रोफाइल’ वाला नेताजस्ता देखिँदैनथे । शनिबार निधन भएको खबर सुन्दा पनि कतिपय नयाँ पुस्ताका सर्वसाधारणले उनलाई ‘पूर्वप्रधानमन्त्री’का रूपमा खासै नाम नसुनेको जस्तो गरे । यद्यपि उनी लामो समयसम्म नेपालको राजनीतिमा छाएका पूर्वपञ्च थिए । उनलाई एकजना आदर्श राजनेताका रूपमा उनका समकालीनहरूले लिने गरेका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री विष्टको जन्म वि.सं. १९८३ साल पुसमा काठमाडौँ ठमेलनजिकै वटू टोलमा भएको थियो । विद्यालयहरु नखुलेको समयमा जन्मेका विष्टले मावली घरमा अक्षर सिके । पछि उनले दरबार हाइस्कुलबाट तृतीय श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे ।
राष्ट्रिय कांग्रेसमा लागेर विष्ट सङ्गठनमा सक्रिय भए । विद्यार्थीकालमै उनले काठमाडौँको सानो गौचरनमा भाषण गरेका थिए । एमएको अध्ययन सकेर नेपाल फर्केपछि विष्ट अध्यापन र राजनीति दुबैमा सक्रिय भए ।
काठमाडौँमा विष्टले केही समय राजनीतिशास्त्र पढाए भने डिल्लीबजारमा खुलेको एडल्ट स्कुलमा पनि अध्यापन गरे ।
पञ्चायत स्थापनाको प्रारम्भमा विष्ट दौडाहा टोलीको अध्यक्ष बने । ०१८ सालमा उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गए । त्यहीबेला राजाले उनलाई ०१८ साल मंसिर २९ गते राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्री बनाए । र, यहीँदेखि उनको सिंहदरबार यात्रा औपचारिकरूपमा सुरु भयो ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका गर्‍यै गर्थे । मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष उनी आफैं थिए भने उपाध्यक्ष डा. तुल्सी गिरीलाई बनाएका थिए ।
यही क्रममा ०२० साल चैत्र २० गते कीर्तिनिधि विष्टको जिम्मेवारी फेरियो । उनलाई शिक्षामन्त्रीका साथै परराष्ट्र मन्त्री पनि बनाइयो । यो सरकारमा पनि डा. गिरी नै अध्यक्ष थिए भने अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सूर्यबहादुर थापालाई उपाध्यक्ष बनाइएको थियो । विष्ट मन्त्रीहरूको ५ औँ बरियतामा थिए ।
राजा महेन्द्रले ०२३ साल माघदेखि अध्यक्ष र उपाध्यक्षको साटो प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनाउन थाले । यही क्रममा ०२३ साल माघ १४ गते पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए भने विष्ट उपप्रधानमन्त्री बनाइए । त्यसबेला वेदानन्द झा गृहमन्त्री बनेका थिए । ०२४ साल जेठ १५ गते पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा पनि सूर्यबहादुर थापा नै प्रधानमन्त्री थिए भने विष्टलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र र आर्थिक योजनाको जिम्मेवारी दिइयो । सो मन्त्रिमण्डलमा राजेश्वर देवकोटाले भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
अध्ययनशील विष्ट राजनीतिमा शिक्षामन्त्रीका रूपमा प्रवेश गरे भने परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा उनले नेपालको राष्ट्रियता सम्वर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले ।
चीनको सीमानामा नेपाली भूमिमा रहेका भारतीय चेकपोष्टहरु विष्टकै पालामा हटेका हुन् । र, यही कारणले उनलाई भारतविरोधी राष्ट्रवादी नेताका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । भारतमै राजनीतिशास्त्र पढेका भएपनि विष्टले भारतीय राजनीतिक हस्तक्षेप कहिल्यै रूचाएनन् । 
नेपाली राजनीतिमा विष्टको योगदानबारे पक्कै पनि विश्लेषकहरूले समीक्षा गर्लान् । तर, समग्रमा हेर्दाखेरि उनको राजनीतिक विशेषता भनेकै चीनसँगको विशेष सम्बन्ध निर्माण गरेर भारतीय हस्तक्षेपबाट नेपाललाई जोगाउनु, भ्रष्टाचारमा नमुछिनु, पदको लोभ नगरी राजनीतिमा नैतिकता एवं त्यागको भावना प्रदर्शन गर्नु, जीवन पर्यन्तसम्म सरल जीवनशैली अपनाउनु अनि निरन्तर राजतन्त्रको सेवक बन्नु इत्यादि हुन् ।
पञ्चायतको अन्त्य भएर ०४६ सालमा बहुदल आइसकेपछि विष्टले राष्ट्रिय जनता परिषदका नामबाट निर्वाचनमा भाग लिए । ०५१ साल काठमाडौँ ३बाट प्रतिनिधसभाको चुनाव लडेका पूर्वप्रधानमन्त्री विष्टले ११८० मत पाएका थिए । उनको पार्टीले देशभरिबाट २८ जना उम्मेदवार उठाएको थियो र देशभरिबाट ८९३१ मत प्राप्त भएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री विष्ट ०५६ सालमा पनि काठमाडौँ ३ बाटै चुनाव लडे । सो चुनावमा उनले ३६५ मत मात्र प्राप्त गरे । देशभरि ३९ स्थानमा उम्मेदवार उठाउँदा उनको पार्टीलाई जम्मा ३७९९ भोट आयो ।
↑ १.० १.१ १.२ १.३ १.४ "आर्यघाटमा सुटुक्कै जल्यो नैतिकताको ‘सिंहदरबार’"।
↑ "झन्डै आँसु झारेनन् केपी ओलीले..."।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=कीर्तीनिधि_विष्ट&oldid=1000275" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०७:५१, ४ अप्रिल २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।